I-CartoDB, eyona ilungileyo yokwenza iimephu ezikwi-Intanethi-iGeofumadas
NgoDisemba, 2013 Geospatial - GIS, ezintsha, Internet kunye neBlogs
I-CartoDB sesinye sezona zinto zinomdla zokuphuhlisa iimephu ezenziwa nge-Intanethi, ukubamba ngamehlo ngela xesha.
Ukuxhonywa kwi-PostGIS kunye ne-PostgreSQL, ukulungele ukusebenzisa, yenye yezona zinto ndizibonileyo ... kwaye ukuba liphulo lemvelaphi ye-Hispanic, longeza ixabiso.
Njengoko luphuhliso olujolise kwi-GIS, ihamba ngakumbi kunale bendikubonise yona ngaphambili Iifayile zeFusion esekelwe kwietable.
CSV .TAB: iifayile ezihlukaniswe yi-comma okanye iithebhu
I-SHP: iifayile ze-ESRI, ezifunekayo kwifayile ye-ZIP eneenkcukacha eziquka iifayile dbf, shp, shx kunye ne-prj
KML, .KMZ kwiGoogle Earth
I-XLS, .XLSX yamaphepha ama-Excel, afuna izihloko kumqolo wokuqala kwaye, inqaku lokuqala lencwadi yokusebenza liya kungeniswa
I-GEOJSON / GeoJSON eqhubeka isetyenziswa kwedatha yendawo, iyenza ibe lula kwaye isebenze ngokufanelekileyo kwiwebhu
I-GPX, isetyenziswa ngokubanzi kutshintshiselwano ngedatha yeGPS
OSM, i-BZ2, iItala eValini yeeNdlela ezivulekileyo
I-ODS, i-OpenDocument ispredishithi
I-SQL, oku kufana nesifom ye SQL yesitatimende seCartoDB API
Ukufakwa kulula, kuya kufuneka ubonise "yongeza itafile", kwaye ubonise ukuba ikuphi Ukutsha kwaba bafana kunomdla, kuba idatha ayinakubizwa kuphela kwidiski yendawo, kodwa ikwabanjelwe kwiDropbox, Google Drayivu okanye kwindawo ene-url eyaziwayo; Ukucacisa ukuba akazukuyifunda kubhabho kodwa uya kuyingenisa; kodwa iyasisindisa ekubeni kufuneka siyithobe kwaye siyilayishe.
Ikhono lokwenza imephu
Ukuba yitafile nje, kunokwenzeka ukubonisa ukuba ichazwe ngokungaphaya ngekholamu nge-geocode njengoko bendibonisile ngaphambili ngeeFusionTables, kodwa nokuba ine-x, y. Inokudityaniswa ngokudityaniswa nenye itafile ngokudibanisa iikholamu okanye ngokufakwa kwamanqaku ngaphakathi kweepoligoni.
Isizukulwana sezahlulo sinomtsalane nje, ngomboniso owenziwe kwangaphambili kunye nokulula ukulawula ubungqingqwa, umbala kunye nokubonakala ngokulula ngokulula.
Ndiphakame ndalala kwiilali zaseHonduras, kwaye uyayibona indlela enomdla ngayo imephu yokuxinana kwabantu ekhwaza isikhumbuza isizathu sokuba amabhanti entlupheko ahlanganiswe kwiimeko ezininzi kunye nobukhulu boorhulumente basekhaya ngaphandle kwemigaqo yokuzimela kwezemali.
Kwaye le imephu efanayo, ilandelwe ngamandla.
Ngokubanzi, izixhobo zohlalutyo kunye nembonakalo ziluncedo kakhulu kuba zikuvumela ukuba wenze iifilitha, iilebheli, iintsomi, ukwenza ngokwezifiso usebenzisa ikhowudi ye-css kunye neengxelo zeSQL.
Ukuba sifuna ukwabelana ngeemephu nabanye, sinokumisela ukuba umcuphi wokukhetha, ilivo, ibha yokukhangela iyaboniswa, ukuba iscroll mouse siya kusebenza ngokusondeza, njl. Emva koko ukufutshane kwe-url okanye ikhowudi yokufaka okanye ikhowudi ye-API.
Ixhasa iimephu ezahlukeneyo zangasemva, kubandakanya iimephu zikaGoogle. Iinkonzo ze-WMS kunye neMephu.
I-CartoDB inenkqubo yokuhla kwamaxabiso, ukusuka kuguqulelo lwasimahla olwamkela iitafile ezi-5 kunye ne-5 MB. Inketho elandelayo ixabisa i $ 29 ngenyanga kwaye ixhasa ukuya kuthi ga kwi-50MB.
Le nguqulo inokusetyenziselwa ukulingwa kangangeentsuku ezili-14, kodwa kufuneka ulumke ukuba kubonakala kungekho kuncitshiswa; Ekupheleni kwexesha ukuba isicwangciso asithengwanga, idatha iyacinywa. Ndicinga ukuba kufanele kubekho ithuba lokugcina ingxelo yasimahla kunye nezithintelo zetyala.
Banokubanakho, kufuneka sibone ukuba inkonzo iqhubeka njani. Ngokuqinisekileyo banezicwangciso zabo kwimiba enjengokubamba kakuhle, ukulayishwa okungagcinwanga okungasetyenziswanga kunye nokusebenza okungaphezulu kwe-API okulungiselelwe abasebenzisi abangabalulekanga, ukuphatha ngaphezulu kweelayidi ezi-4 ngomboniso, njl. Okwangoku eyona nto inqongopheleyo kukufuna ukusebenzisa usetyenziso kwithebhulethi.
Inkonzo entle kakhulu. Ukuba into elindelekileyo kukwenza iimephu ezikwi-intanethi, ngokulula nangamandla.
Uphengululo esikwenzayo namhlanje luyakhawuleza, kodwa kuninzi esingakubona.
Ndicebisa ukuba bavavanye inkonzo, kuba i-API yayo iyafumaneka kwaye yi-OpenSource, ukuze abo bazi ngakumbi ... bakwazi ukuxhaphaza ngaphezulu.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Yenza imephu yonyulo eneeFusiontables- kwimizuzu eli-10
Post Next 2014-Uqikelelo olufutshane lomxholo weGeoOkulandelayo »
2 Iimpendulo kwi "CartoDB, eyona ilungileyo yokwenza iimephu ezikwi-Intanethi"
Enkosi ngcaciso. Umyalezo uthi ukuba ixesha lokulingwa liphelile, yonke idatha iyakususwa .. Ngaba kusekho ixesha lokukhetha ukuba zeziphi iitafile ezakushiya zisebenza kuhlobo lwazo?
Javier Álvarez Medina uthi:
Inqaku, ukuba kunokwenzeka ukuba udibanise xa unesilingo se-magellan :). Inqaku elikhulu!